China Suction-Kubvisa Access Sheath yeMushandisi Mumwe Fekitori uye vagadziri | Kangyuan
• Gadzirisa matambudziko euric ibwe kufamba uye kudzoka kumashure zvachose, Pasi pekumanikidza kwakashata, inogona kudzivirira kudzoka kwedombo, kudzivirira kufamba kwedombo uye kubvisa dombo kunze zvinobudirira.
•Gadzirisa matambudziko euric ibwe kufamba uye kudzoka kumashure zvachose, Pasi pekumanikidza kwakashata, inogona kudzivirira kudzoka kwedombo, kudzivirira kufamba kwedombo uye kubvisa dombo kunze zvinobudirira.
•Deredza kudzvinyirira kwepamusoro kwechiuno chehudyu zvinobudirira, Kuramba uchidiridzira panguva iyi yekukweva, kunogona kuumba kutenderera kwemvura kusingamiswe kuti kuderedze kumanikidza kwepamusoro pechiuno chenhengo zvinobudirira.
•Inogona kudzivirira kubuda kweropa kuchengetedza yakajeka chiratidzo panguva yekuvhiya maitiro. Pasi pekuenderera kwekudiridza uye kukweva, inogona kuchenesa pus, ropa clot uye gravel kunze, chengetedza kuvhiyiwa kunoitwa nechiratidzo chakajeka, kuve nechokwadi chekushanda kwekuchengetedza, uye kupfupisa nguva yekushanda.
•Wedzera kuomarara kweiyo ureteral kuwana zvine mutsindo kuti uone mashandiro aitwa mushe, Dhizaini yeapepper dilator neAQ hydrophilic yakavharwa inogona kuwedzera kuomarara kwekuwana ureteral zvinobudirira.
•Iyo sheath uye dilator tipi ndeyeAQ hydrophilic yakavharwa. Iyo hydrophilic yekukora ukobvu hweichi chigadzirwa inongova 0.03mm chete. Iyo COF ndeyevhareji ye0.050 nekudzokorora frithion kuyedzwa Mhedzisiro yacho yakanyanya kudarika zvigadzirwa zvakafanana.
•Iyo yakashata yekumanikidza yekukwevera ndima inogona kuve yakabatana neasina kusimba kumanikidza suction mweya pombi kana yakasanganiswa pombi yemhepo pombi.
•Silicone yekuisa chisimbiso plug, iri nyore kushandisa.
•Zviri nyore uye zvakakunakira kuunganidza mubatanidzwa weSheati chubhu uye mubatanidzwa wekuwedzera chubhu pamwechete.
•Negative kumanikidza maringe gomba, zvinobudirira chinja kubvisa kumanikidzwa.
•Iyo tube yemuviri inoratidzirwa nezviyero, ruvara rwakajeka uye runosiyaniswa. Inogona kubatsira chiremba kuti atonge chinhambwe pakati pemuhara uye urethra nenzira yakatwasuka uye iri nyore.
•Iko pamusoro pebhubhu muviri kwakafukidzwa neAQ hydrophilic bemhapemha, inova yakapfava, kukweshera idiki, avhareji kukosha kwesimba simba COF iri 0.050, uye zviri nyore kuwedzera mwenje kuburikidza neakamanikana chidimbu, kuderedza kukuvara uye kusarwadziwa.
•Batanidza pamwe nekuwedzera chubhu zvakanaka.
•Iyo sheath tip inotsvedza kudzivisa urethral kukuvara.
•Zano re dilator iri AQ hydrophilic yakavharwa. Iyo dhizaini ndeye taper tip. Inogona kuwedzera zvishoma nezvishoma kuburikidza nekukwesana uye extrusion kuti igadzire yakakwana uye yakajairwa nzira dzekuvhiya, zviri nyore kushandisa inochinja ureteroscope, kuchengetedza ureter panguva inodzokororwa kuchinjaniswa kwechiridzwa panguva yeureteroscopy.
Pashure: Kubvisa Catheter
Zvadaro: Silicone Dumbu Tube
kubvisa-kubuda kwekuwana sheath
Chiremba kupatsanurwa gauni
Yakasimbiswa Laryngeal Mask Airway
Inoraswa Urethral Catheterization Kit
Yakasimbiswa Endotracheal Tube